गत वर्ष अगष्ट ५ मा संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएको थियो । लद्दाखलाई जम्मु–कश्मिरबाट छुट्याएर भिन्नै केन्द्रशासित प्रदेश बनाइएको थियो । केही दिनअघि म र मेरा केही साथीहरुलाई जेलमुक्त गरिएको छ । तर, घरभन्दा बाहिर जाने अनुमति दिएको छैन ।
कश्मिरको इतिहासमा भिन्नै ‘क्यालेन्डर अफ नेगेटिभीटी’ छ । यहाँ त्यस्ता धेरै मितिहरु छन्– जसलाई हामी कालो दिन भन्ने गर्छौं । कश्मिर भारतमा विलय भएको दिन कुनै खुशीको दिन थिएन । सन् १९५३ मा जब यहाँका प्रधानमन्त्री शेख अब्दुल्लालाई पदबाट हटाएर २२ वर्ष जेल पठाइएको थियो, त्यो अर्को दुःखद दिन थियो । त्यो दिन ९ अगष्ट थियो । त्यो दिनलाई धेरै पछिसम्म कालो दिवस बनाइयो यहाँ ।
आज फेरि अर्को कालो दिवस बनेको छ– अगष्ट ५ । अघिल्लो वर्ष म प्रदेश सरकारको प्रवक्ता थिए । पिडिपी र भाजपाको संयुक्त सरकार थियो । त्यो गठबन्धन बनाउँदा मोदीजी आफैं सामेल थिए । उनले भनेका थिए कि जम्मु–कश्मिरको जुन विशेष स्वायत्तता वा विशेष दर्जा भारतको संविधानमा छ, त्यो चलाउने पक्षमा छैन । मोदीको हामीसँग प्रतिबद्धता थियो- पाकिस्तानतर्फ परेको कश्मिरलाई लिएर भारत–पाक सम्बन्धमा जुन समस्या छ, त्यो वार्ताद्वारा हल गर्ने प्रयत्न गरिनेछ ।
हुर्रियत जस्ता संगठनसँग वार्ता गर्ने कुरा थियो त्यसमा । ती कुनै मौखिक हैन, लिखित सम्झौता थिए । तर हामीसँग मोदीले विश्वासघात गरे । ती मान्छेहरुमा भारतको संविधानप्रति सम्मानको भावना थिएन । धारा ३७० र कश्मिरको विशेष दर्जा एक संवैधानिक प्रावधान थियो । एक विशाल देशमा जम्मु–कश्मिरको स्वायत्तता एक सानो प्रबन्धन थियो । त्यसले भारतको आम राजनीतिमा कुनै फरक पर्नेवाला थिएन ।
जब हाम्रो गठबन्धन भत्कियो, सरकार ढिसमिस भयो, त्यसपछि भाजपाले अगष्ट ५ को घटना गरायो । यो काममा भाजपा हामीलाई सँगै लान चाहन्थ्यो । उनीहरुले महबुबा मुुफ्तीलाई यो भनेका थिए । तर उनले स्वीकार गरिनन् । उनी अहिले पनि जेलमा छिन । अरु सबै जसो छुटे । फारुख अदुल्ला, उमर अब्दुल्ला छुटे तर मुफ्ती अझै जेलमा छन् । मुुफ्ती अगष्ट ५ को घटनाविरुद्ध चट्टानजस्तै उभिएकी छन् । उनले यो सवालमा कुनै सम्झौता गर्लिनजस्तो लाग्दैन ।
धारा ३७० कश्मिरको आधारशीला थियो । जम्मु–कश्मिरको मूल्य प्रणाली नै त्यसैमा टिकेको थियो । आज कश्मिरी मुस्लिम मात्र हैन, यहाँका हिन्दूसँग नै अब के बाँकी रह्यो र ? आज कश्मिरी मुस्लिम र हिन्दू संसारकै सबैभन्दा शक्तिहीन मानिस भएका छन् ।
हाम्रो जागिर जाँदैछ । जमिन जाँदैछ । जम्मुमा एक ठूलो जनसांख्यिक परिवर्तनको लहर ल्याउन खोजिँदैछ । यहाँ अहिले नयाँ चुनाव गर्ने कुरा हुँदैछ, त्यस्तो चुनावको कुनै अर्थ छैन । हाम्रा सबै चिज धारा ३७० मा अल्झेको छ । त्यो नभए अघि बढ्ने कुनै आधार नै देखिन्न ।
यो घटनालाई केवल सत्ता राजनीतिको दृष्टिकोणले मात्र हेर्न सकिन्न । सत्ता राजनीति लोकतन्त्रको सार हैन । लोकतन्त्रको सार प्रतिरोध हो । संघर्ष हो । प्रतिरोध राजनीतिकै कारण मानिस आफ्नो मुद्दामा लामो टिक्न सक्दछन् । यदि सत्ता राजनीति मात्र हेर्ने हो भने त्यो सम्भव हुन्न ।
गत वर्षको अगष्ट ५ मा हाम्रो ठूलो बेइज्जत भएको छ । हामीप्रति एक प्रकारको ह्युमिलेशन गरिएको छ । यो कसरी सहन सकिन्छ ? अब महबुबा मुफ्ती मुख्यमन्त्री बनून् वा उमर अबदुल्ला मुख्यमन्त्री बनून्, त्यसको के अर्थ छ र ? जब ‘नेशन’ को ठाउँमा हामीले ‘ह्युमीलेशन’ पाएका छौं, यस्तो बेला चुनाव वा सत्ताको कुरा गर्नु नै निरर्थक हुन्छ । जबसम्म राष्ट्र फिर्ता हुन्न, प्रतिष्ठा फिर्ता हुन्न, आत्मसम्मान फिर्ता हुन यहाँ केही पनि हुन्न ।
अहिले हाम्रा लागि एक अर्कामा झगडाउने, चुनाव लड्ने वा प्रतिस्पर्धा गर्ने त्यो स्पेश नै बाँकी छैन । अहिले गर्न सकिने भनेको एक हुने र लड्ने हो । राष्ट्र फिर्ता गर्ने हो, प्रतिष्ठा फिर्ता गर्ने हो, आत्मसम्मान फिर्ता गर्ने हो ।
ममाथि बम हमला गरियो । म बाँचे तर ४ जना मरे । मेरो घर जलाइयो । यस्तो स्थितिमा अरु के कुरा हुन सक्दछ ? कश्मिर एक मुस्लिम बहुमत राज्य थियो धर्मनिरपेक्ष भारतमा । आज भारतको नयाँ पहिचान बन्यो । हिन्दू भारत । भाजपालाई बुझ्ने विषयमा हाम्रो गल्ती पक्कै भयो । भाजपालाई हामीले एक सामान्य राजनीतिक दल ठान्यौं । जम्मु–कश्मिरमा उसलाई स्पेश दियौं । राजनीतिक मान्यता दियौं । गठबन्धन गर्‍यौं । यी गल्ती थिए ।
जम्मु–कश्मिरको संसदमा हामीले नेहरुको भाषण सुनेका थियौं, नरसिम्ह रावको भाषण सुनेका थियो । कश्मिरको स्वायक्तता यति नाजुक होला लागेको थिएन । आज भाजपाले कश्मिरलाई हिन्दुराष्ट्रको जगको ढुंगा बनाएको छ । अगष्ट ५ बारे यत्रो गौरब छ उनीहरुमा कि उनीहरु यही मितिमा राममन्दिरको शिलान्यास गर्दैछन् ।
भाजपाले हरेक घटनालाई ‘मुस्लिम समस्या’ को रुपमा प्रकट गर्न खोजिरहेको छ । उसको विचारमा कश्मिर समस्या मुस्लिम समस्या हो । नागरिकता संशोधन कानुनको समस्या मुस्लिम समस्या हो । राममन्दिर मुश्लिम समस्या हो । आतंकवादको समस्या मुस्लिम समस्या हो । यहाँ यसरी नयाँ भाष्य बनाइदैछ कि भारतका सबै समस्याको जड मुस्लिम हुन् ।
यसरी भाजपा दमनको नयाँ आधार तय गर्न खोज्दैछ । तर विचारलाई दमन गर्न त्यति सजिलो हुँदैन । काश्मिरका जनतामा यो बलियो भावना छ कि हिन्दुस्तानले हामीमाथि बारम्बार गर्न नहुने काम गरेको छ । ज्यादति गरेको छ, यहाँ जति ठूलो फौज ल्याएर राखे पनि मानिसको मनबाट त्यो हट्नेवाला छैन ।
आज काश्मिर प्रशासनको काम नै हरेक दिन नयाँनयाँ आदेश जारी गर्नु भएको छ । कश्मिर प्रशासनले जब कुनै नयाँ सुचना निकाल्छ, जनता तर्सिनुपर्ने हुन्छ कि के खोस्न लागियो । कहिले– फौजले जुनसुकै जमिन कब्जा गर्न पाउनेछ जस्त सूचना हुन्छन् । पक्कै उनीहरु कुनै रणनीतिक योजना लागू गर्दै होलान् । इजरायलले प्यालेस्टिाइनमा गरे जस्तो । यो काम मुस्लिम बहुल कश्मिरमा मात्र भइरहेको छैन । हिन्दू बहुल जम्मु क्षेत्रको पनि त्यही हालत छ ।
उनीहरुको योजना प्रष्ट छ । उनीहरु जनसांख्यिक परिवर्तनको प्रयास गर्दैछन् । उनीहरु यो प्रदेशमा मुस्लिमलाई अल्पमतमा पार्न चाहन्छन् । त्यसका लागि अरु प्रदेशबाट हिन्दू जनसंख्या आप्रवासन गराउने योजना छ । कश्मिरमा कहिल्यै कोही मुस्लिम मुख्यमन्त्री हुन नसकोस् भन्ने सोच लागू गर्न खोजिँदैछ । प्रशासन त्यस्तै छ । यहाँ कहिँकतै कश्मिरी मुस्लिम देखिन्न । यहाँको अहिलेको प्रशासन हेर्दा लिवियामा इटालीको प्रशासनजस्तो देखिन्छ ।
उनीहरुले नबुझेको कुरा के छ भने कश्मिर इजराइल हैन । कश्मिर विश्वका तीन आणविक शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा छ । यहाँ लेवनन र जोर्डन हैन, चीन र पाकिस्तान छन् । यो भूराजनीति उनीहरुले बुझ्नु पर्दछ ।
(अख्तर कश्मिरको पूर्व मुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीको पार्टी पिडिपीका वरिष्ठ नेता हुन् । यो आलेख उनले द वायरमा दिएको अन्तर्वार्ताबाट उतारिएको हो)